Ziri ezi site amara site okwukwe na Jizọs Kraịst | Apg29
Ziri ezi site amara site okwukwe na Jizọs Kraịst
Man ike ime onwe ya ka onye ezi omume.
Mgbe Bible na-ekwu na a nwoke bụ ziri ezi, ọ pụtara na ọ bụ site na Chineke ezi omume, ọ na-tọhapụwo mmehie ya site ikpe dara na Jesus Christ. Onye di Chineke n'onwe ya.
The echiche ziri ezi na ezi omume do bụ kpam kpam Central echiche nke okwukwe nke ndị Kraịst. Okwu ziri ezi na Swedish translation nke Bible e si sụgharịa odide Grik mbụ, "dikaíoo", okwu bụ na ngwaa pụtara iwu ikwusa onye ọcha. Onye na-tọhapụwo ikpe ọmụma o nwere. I nwere ike iji tụnyere echiche nke mgbe a juri ma ọ bụ a-ikpe a ikpe na-akọwa ụfọdụ nke "ikpe amaghị".
Man ike ime onwe ya ka onye ezi omume. Pọl na-ede na 2 Ndị Kọrịnt 5:18, 19
"Ihe niile si n'aka Chineke, bụ ndị dị ná mma ka anyị na-onwe ya site na Kraịst na nyere anyị ozi nke dị ná mma. N'ihi na Chineke na Kraịst mma n'ụwa ka ya onwe. Ọ, ọ bụghị na-agụta ndị mmehie, na o mere ka anyị na okwu Chineke dị ná mma. "
"Mmadụ niile emehiewo ma eru ebube Chineke, na na-agu n'onye ezi omume kpamkpam na akwụ ya site n'amara ya, n'ihi na Kraịst Jizọs gbapụtara ha." Ndị Rom 3:23, 24
Otu N'ihi ya nke a ziri ezi site n'okwukwe bụ na anyị nwere a na Chineke dịrị n'udo.
"Ya mere ebe n'onye ezi omume site n'okwukwe, ayi na Chineke di n'udo site n'aka Onyenwe anyị Jizọs Kraịst." Ndị Rom 5: 1
Ọ bụ naanị na amara na-abịa banyere ziri ezi
"Ma, ebe anyị maara na nwoke a na-adịghị n'onye ezi omume site n'ọrụ nke iwu kama site okwukwe na Jizọs Kraịst, ọbụna anyị kweere na Kraist Jisus, ka anyị nwere ike n'onye ezi omume site okwukwe na Kraịst na bụghị site n'idebe iwu. N'ihi na site n'ọrụ nke iwu na ọ dịghị onye na-ekwesị. "Ndị Galeshia 2:16
Nke a ziri ezi bụ doo anya na nti site na ọnwụ ịchụ àjà nke Jizọs, Otú ọ dị, mkpa ka a natara site okwukwe nke onye ahụ na-eje ozi nzọpụta / ziri ezi maka ya.
E nwere otú ọ dịghị kwa-Automatic-nzọpụta. Biko mara na nke a bụ mkpa!
Na 2 Ndị Kọrịnt 5:20, 21 anyị na-agụ, "Ya mere, anyị na-nnọchiteanya maka Christ. Ọ bụ Chineke na-eme ka ya mkpesa site n'ọnụ anyị. Anyị na-ajụ na n'ihi Kraịst , Chineke ịdịghachi ná mma. Ọ bụ ndị maara mmehie ọ bụla, Chineke n'ebe anyị na-mere ka ọ bụrụ mmehie, n'ihi na anyị wee ghọọ ndị ezi omume Chineke. "
Ọbụna na Old Testament, anyị na-agụ n'onye ezi omume site n'okwukwe. Ma na 1 Exodus 15: 6, Ndi Rom 4: 3 na Ndi Galetia 3: 6 ọ na-ekwu banyere Abram (= Abraham) otú o kwere Chineke, na otú ọ na a guru nye ya n'ezi omume. Na Rom 3:21, 22, Pọl kwuru na ugbu a ezi omume nke Chineke na e kpugheere, ịbụ iwu na ndi-amuma na-agba àmà, ezi omume nke Chineke site na okwukwe na Jizọs Kraịst niile bụ ndị kweere. Anyị na-ahụ n'amaokwu ndị a otú ma ndị iwu na ndi-amuma na e mbụ buru amụma ziri ezi site okwukwe na Jizọs Kraịst. The Bible na-agwa anyị banyere otú anyị ga-bụghị naanị na-agu n'onye ezi omume site na okwukwe na Jizọs Kraịst, ma na-banyere otú ya onwe ya na-aghọ anyị ezi omume! Jeremiah 23: 6 na Jeremiah 33:16 kwuru na Onyenwe anyị anyị ezi omume. Pọl na-ekwu na 1 Ndị Kọrịnt 1:30
"O nwere gị ekele maka na ị na-na Kraịst Jizọs, bụ onye Chineke mere ka anyị amamihe, ezi omume, nsọ na mgbapụta"
N'ihi ya, ọ bụ ezi omume nke Jizọs Kraịst, bụ onye na-mkpa ndị kweere na ya, na-eme ka Nna na-ekwu, anyị ndị ezi omume. Dị ka anyị na-agụ ugbu a na abụọ posts, banyere Jizọs Kraịst, anyị nanị olileanya, otú a ka Chineke ghara anam nwoke n'enweghị onye nkwado mgbe ọ bụ n'ogige Iden emehiewo ya, na họọrọ na-aga n'ụzọ nke ya. Anyị na-agụ banyere Chineke na atụmatụ nzọpụta, eziga Ọkpara ọ hụrụ n'anya, bụ Jizọs, ka eme ka o kwe onye nwere ike na ya dịrị n'udo. Ama na ọ bụghị n'ihi na Jizọs Kraịst chụọ àjà ọnwụ na mbilite n'ọnwụ (Ndị Rom 4: 23-25) N'ihi ya, anyị niile nwụrụ nke mmehie anyị, ọnwụ Jizọs na-ekwu banyere na John 8:24.
Ka ịkwụsị a post na a ụtụ mkpọsa nke na Onye Nzọpụta Jesus Christ.
"Ọ bụ ezie na ọ bụ n'ụdị Chineke, adịghị ewere ohiha Chineke dị ka akwụ ma nyere onwe ya site n'ịkpa a ohu ya ghọrọ mmadụ. Ọ hụrụ anya dị ka a nwoke wedara onwe ya ala wee rube isi ruo ọnwụ - ọbụna ọnwụ n'elu obe. Ya mere, Chineke emewo ka oké elu Ya nyere Ya aha n'elu ọ bụla aha, na aha Jisọs ka ikpere nile huru, ke n'eluigwe na n'elu ụwa na n'okpuru ala, na ire ọ bụla ekwupụta na Chineke Nna nsọpụrụ na Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. "ndị Filipaị 2: 6-11.